Brown Headed Parrot - Iintaka - Mzantsi Afrika
I-Brown Headed Parrot yenye inyoni eluhlaza enentloko eluhlaza. Iphuzi phantsi kwamaphiko ephambi apho ngeli xesha inokubonwa ngokufanelekileyo xa ihamba. Iris i-tyheli. Iinwele zeBrown Headed Parrot zinomlomo ococekileyo, unomnyama kwi-tip of upper mandible. Ubungakanani bomnyama obukhoyo buxhomekeke kwintaka ngamnye. Ezinye iintloko ezibomvu zinamehlo aphuzi kodwa zibomvu, ziphuzi ezimnyama. Abanye banamabala aluhlaza njengezindala.
Zonke iintloko ezibomvu zeentwazana zinomfutho omnyama, phantse amehlo abamnyama, okukhanyisa umbala wabo omdala ngelixesha leentaka lonyaka. Iinwele Brown Headed Parrot zinomthunzi omnyama obomvu ogqithisa ngokukhawuleza ube luhlaza emqaleni. Igama lezandla zenzululwazi ebomdaka, cryptoxanthus, lithetha ngokuthe ngqo 'ukufihla uluhlaza' kwaye lithetha umbala ophuzi ngaphantsi kwephiko. Iinwele zeBrown ziyingqungquthela encinci. Baye malunga ne-9 'ubudala kuquka umsila omfutshane.
Bondla kwiintlobo zeembewu, iinqatha, amajikijolo, iintyatyambo, iziqhamo kunye nectar. Baya kuhlasela ii-millet kunye neendawo zokutya, kwaye banokuqwalaselwa njengeengambuzane zezolimo kwezinye iindawo. Zihlala zifumaneka kumaqela ayi-50 apho kukho umthombo ofanelekileyo wokutya.
Iinwele ze-Brown Headed Parrot ziyakucingwa zivuthiwe malunga neminyaka emi-2 ubudala, kodwa zingazalanga zize zibe zi-3 okanye 4. Iintloko ze Brown Headed Parrot, ezinjengePoicephalus, ziqhele ukuba zizalise ebusika, nangona zikhona ezo ziza kubakho ngonyaka. Uninzi lwababini luza kubeka ii-2 okanye ezintathu ngezihlandlo ngonyaka, kunye nokuba mhlawumbi kubekho okuqhelekileyo kunamaqanda ama-3 ukuya kuma-4 kumyinge. Ixesha lokuxubusha liqhelekile kwiintsuku eziyi-28. Uninzi lweentloko ezimdaka ziluhlaza malunga nee-8 ukuya kweeveki ubudala.
Iintloko zeBrown Headed Parrot zidlalwa ngamabini kunye namaqela amancinci, kwaye zibonakala zikhetha imithi emikhulu, emide. Baya kuhlala behlala phezulu. Bahlaziye kwaye bahluthwe kakuhle, abambalwa babonwa xa bengabhendi ukusuka emthini ukuya emthini. Ngokutsho kweLexicon of Parrots, iintloko ezimdaka ngamanye amaxesha zifunyanwa zihamba kunye nepi zasearrot eKapa.
I-Brown Headed Parrot ivela kwimpuma yaseMzantsi Afrika. Ezantsi-mpuma Afrika, efumaneka kwiindawo zaseMzantsi Afrika, iKenya, iZululand, Mozambique, iTanzania, iZimbabwe, iMali kunye neziqithi zaseZanzibar nasePemba.